Kooxda Arsenal oo dalka Spain ka arkootay bedelka Dani Ceballos oo dib ugu laabanaya Real Madrid – Gool FM
Haaruun June 10, 2020
(London) 10 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la soo warinayaa inay bedelka Dani Ceballos ka arkootay dalka Spain oo ay doonayso inay la soo wareegto.
Kubbad-abuuraha kooxda Real Betis ee Nabil Fekir ayaa la soo sheegayaa inuu u muuqdo bartilmaameedka ugu macquulsan ee Arsenal.
Inkastoo si xooggan loola xiriirinayay Liverpool xilli ciyaareedkii hore ayaa haddana Fekir waxa uu si lama filaan ah ugu dhaqaaqay kooxda Betis xagaagii lasoo dhaafay.
Xiddiga reer France waxa uu dhaliyay 7 gool, isla markaana waxa uu sameeyey saddex caawin 22 kulan oo La Liga laga ciyaaray, inkastoo saamayn dhaqaale ee caabuqa Coronavirus ay jirto waxay taasi keeni kartaa in Betis ay diyaar u tahay inay lacag kaash ah ku hesho 26-sano jirkaan.
Sida ay warinayso Jariiradda Daily Star, Arsenal ayaa wax ka weydiisay Fekir haddii uu diyaar noqon doono inta lagu jiro suuqa soo aaddan, iyadoo ay u badan tahay inuu heshiiskan dhaqan geli doono bisha Agoosto.
Warbixinta ayaa soo jeedinaysa in Gunners ay u tixgelinayso ciyaaryahankii hore ee Kooxda Lyon inuu yahay bedelka tooska ah ee Dani Ceballos, kaasoo ay u badan tahay inuu ku laaban doono Real Madrid kaddib heshiiskii amaahda ahaa ee uu ku joogay garoonka Emirates.
Carqaladda ugu weyn ayaa laga yaabaa inay noqoto qiimaha lagu rabo Fekir oo ay u badan tahay inay noqon doonto 50 milyan oo gini, iyadoo Arsenal aysan waqtigaan lacagtaas bixin karin sida la warinayo.
Manchester United oo kansashay kulankii ay shalay la ciyaari lahayd Stoke City & Sababta kulankan loo baajiyey oo walwal hor leh abuuraysa
Bayern Munich oo soo bandhigtay maaliyadda ay xiran doonto marka ay gurigeeda ku ciyaarayso fasal ciyaareedka cusub ee 2020/21.… + SAWIRRO